ကံတရား ဆိုတာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ ရတဲ့ အရာပါ - YOYARLAY Digital Media and News
ကံတရား ဆိုတာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ ရတဲ့ အရာပါ
Published: March 20, 20188:18 am Updated: November 8, 20195:08 pm
သင်ဟာ ကံကောင်းတတ်သူလား? ကံဆိုးတတ်သူလား? ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်း ဆိုတာတွေဟာ ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတွေ၊ ကြုံရာကျပန်း ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ အဲဒါတွေဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူတို့နဲ့ပဲ ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စိတ်ပညာရှင်လည်းဖြစ် စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ ရစ်ချတ် ဝိုက်စ်မန်း (Richard Wiseman) ဟာ ကံတရား (luck) ကို သိပ္ပံနည်းကျကျ (10)နှစ်တိုင်အောင် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သတင်းစာ တစ်ခုမှာ ကြော်ငြာ တစ်ခုထည့်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကံအရမ်းဆိုးတယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေရယ် ကံအရမ်းကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေရယ် သူ့ကို ဆက်သွယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပေါ့။ သူ့ကို ဆက်သွယ်လာတာ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံ ပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ လူ ၄၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။
စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာ သူဟာ အဲဒီလူတွေ အကုန်လုံးကို တူညီတဲ့ သတင်းစာ တစ်စောင်စီပေးပြီး အထဲမှာ ဓာတ်ပုံ ဘယ်နှစ်ပုံ ပါသလဲ ဆိုတာကို ရေတွက်စေပါတယ်။ ကံဆိုးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ ၂ မိနစ်ခန့်ကြာပြီး ကံကောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေက စက္ကန့်ပိုင်းသာ ကြာပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်? ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒုတိယ စာမျက်နှာမှာတင် “ရေတွက်နေတာကို ရပ်လိုက်ပါ၊ ဓာတ်ပုံပေါင်း (43) ပုံ ရှိပါတယ်” လို့ စာတန်းမည်းနဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား စာတစ်ကြောင်း ရေးထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။
နောက်ထပ် စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာတော့ သူက အားလုံးကို ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခု ပြောပြပြီး “သင်ဟာ ဘဏ် တစ်ခုကို ရောက်နေတယ် ဆိုပါစို့၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဓားပြတွေ ဝင်လာပြီး ဘဏ်ဓားပြတိုက်တယ်ပေါ့၊ သူပစ်လိုက်တဲ့ သေနတ်ကျည်ဆန်ဟာ သင့်ရဲ့ လက်မောင်းကို ထိသွားခဲ့တယ် ဆိုရင် သင်ဟာ ကံကောင်းသလား၊ ကံဆိုးသလား?” လို့ မေးပါတယ်။
ကံဆိုးတတ်တယ် ဆိုတဲ့ လူတွေက သူတို့ဟာ အဲ့ဒီနေရာမှာ ရှိမနေသင့်တဲ့ အကြောင်း၊ ရှိနေခဲ့ရင်တောင်မှ လူတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့ ကြားထဲမှာ သူတို့ကိုမှ ကျည်ဆန်ထိတာဟာ ကံဆိုးတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါသတဲ့။ ကံကောင်းတတ်တယ် ဆိုတဲ့ လူတွေကတော့ “တော်သေးတာပေါ့ဗျ ဒါကံကောင်းတာပေါ့၊ ခေါင်းကို မှန်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” လို့ ပြောကြပါတယ်တဲ့။
ဝိုက်စ်မန်းက “ကံကောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ အဆိုးဆုံးတွေ ဖြစ်မကုန်တာကိုပဲ ကံကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး သူတို့ဘဝကို ကျေနပ်တတ်ကြသူတွေပါ။ အဲဒါကပဲ အပြန်အလှန်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်တွေကို ခိုင်မာစေပြီး ကံကောင်းတဲ့ဘဝ တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ခိုင်မာလာစေပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဝိုက်စ်မန်းက လူတွေကို ကံကောင်းလာနိုင်စေမယ့် အချက် (၄) ချက်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
1။ ဖြစ်လာနိုင်ချေတွေကို လက်ခံကြိုဆိုပါ။ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ရယူပြီး ပိုမို ပျော့ပျောင်းတဲ့ စိတ်သဘောထားကို ရအောင်ထားပါ။
2။ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ စိတ်ကို ရှင်းလင်းအောင်ကြိုးစားပြီး အလိုလို သိမြင်တတ်တဲ့ စိတ်ကို အာရုံစူးစိုက်ပါ။
3။ ကောင်းတဲ့ ကံတရားကိုသာ မျှော်လင့်ပါ။ ကံကောင်းတဲ့လူတွေဟာ အရာရာဟာ ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆထားတတ်ကြပြီး အဲဒါကပဲ သူတို့ကို ဆုံးရှုံးမှု တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရရင် ရှေ့ဆက်လျှောက်နိုင်အောင် တွန်းအားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
4။ ကံဆိုးခြင်းကို ကောင်းလာအောင် လုပ်ပါ။ အဆိုးဆုံးဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စတွေကို မျှော်လင့်ထားပါ။ အရှုံးပေးတာထက်စာရင် ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ကံတရားနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒီထက်ပိုပြီး လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရစ်ချတ် ဝိုက်စ်မန်းရေးတဲ့ The Luck Factor ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။
Previous Previous post: ဒီတစ်ပတ်အတွက် ကြည့်စရာ ရုပ်ရှင်
Next Next post: ဝပေမယ့် လှအောင် ဓာတ်ပုံ ဘယ်လိုရိုက်မလဲ?
အညာဓလေ့ မြန်မာဓလေ့ ဆိုရင် တမာ ပင်တွေကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ တမာချဉ် အညွန့်အဖူးလေးတွေ က မြန်မာတွေ နှစ်သက်တဲ့ ငါးပိရည်နဲ့ အတွဲအဖက် တို့စရာတစ်ခုပါပဲ။ တမာ က အရွက်တင် စားလို့ရတာမဟုတ်ဘဲ ကိုင်းရဲ့အရိုးကိုလည်း ဆေးဖော်စပ်တဲ့အထဲ…
Published: April 7, 20205:59 pm
အကြိတ်ဗေဒပညာရှင်တွေက ကင်ဆာရောဂါသည်တွေရဲ့သွေးကြောထဲကို သေးငယ်လွန်းတဲ့ရွှေပြားပတ်အမှုန်လေးတွေ ထိုးသွင်းပြီး ကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ချေ ရှိ မရှိကို လေ့လာစူးစမ်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်တွေကို ဒီနည်းနဲ့ စမ်းသပ်ရာမှာတော့ ကင်ဆာကြိတ်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Team (ရိုးရာလေး) Post Views: 2,335
Published: February 12, 20191:27 pm
Published: December 1, 20205:43 pm Updated: 5:47 pm
Published: December 1, 20204:56 pm Updated: 5:42 pm